Fanazavana Miorina afovoan-dranomasina desalination desalination rano namboarina ho an'ny Nosy amin'ny fanaovana rano fisotro madio avy amin'ny ranomasina. Tsipiriany haingana Toerana niaviany: Shina anarana marika: JIETONG Warranty: 1 taona toetra: mpanjifa fotoana famokarana: 90 andro taratasy fanamarinana: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 angona teknika: fahafaha-manao: 3m3 / ora fitoeran-javatra: Fanjakam-baravarana mihinana herinaratra: 13.5kw.h Taham-pahombiazana : 30%; Rano madio: TDS <38000ppm Famokarana rano <800ppm Operation ...
Fanazavana Ny rafi-pitsaboana rano madio / fahadiovana avo dia karazana fitaovana iray hahatratrarana ny tanjon'ny fanadiovan-drano amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fitsaboana rano sy ny rafitra fanaraha-maso kalitaon'ny rano. Araka ny fepetra takian'ny mpampiasa amin'ny fahadiovan'ny rano dia ampiarahinay sy alainay ny pretreatment, osmosis miverimberina ary ny fifanakalozana ion bed bed (na EDI Electro-deionization) mba hanamboarana fitaovana fitsaboana rano madio namboarina, ankoatr'izay, ny rehetra fiara mifono vy ao amin'ny rafitra dia ...
Masinina fanondranana ranomasina kely habe
Fanazavana Masinina fanalefahana ranomasina kely habe hanamboarana rano fisotro madio hampiasaina any an-trano. Tsipiriany haingana Toerana niaviany: Shina anarana marika: JIETONG Warranty: 1 taona toetra: mpanjifa fotoana famokarana: 80 andro taratasy fanamarinana: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ranomasina mikoriana CCS dingana → paompy manainga → tanky sediment Flocculant → Sivana fasika quartz → Sivana entona karbaona → Sivana fiarovana → Sivana mazava tsara → Paompy miakatra ambony → Rafitra RO → Famokarana ...
Fanazavana ny rafi-pandehanan-dranomasina electrolysis chlorination dia mampiasa ranomasina voajanahary mba hamoahana vahaolana hypochlorite sodium amin'ny tsipika miaraka amin'ny fifantohana 2000ppm amin'ny alàlan'ny herinaratra an-dranomasina, izay afaka misoroka tsara ny fitomboan'ny zavatra biolojika amin'ny fitaovana. Ny vahaolana sodium hypochlorite dia miampita mivantana amin'ny rano an-dranomasina amin'ny alàlan'ny paompy fandrefesana, mifehy tsara ny fitomboan'ny zavamiaina bitika, trondro ary biolojika hafa. ary be mpampiasa amin'ny sehatry ny morontsiraka. Ity ...
Fanazavana Raiso ny sira misy ny sira sy ny rano paompy ho toy ny akora amin'ny alàlan'ny sela elektrolisis mba hanomanana vahaolana 0,6-0,8% (6-8g / l) ambany hypochlorite amin'ny sodium ao an-toerana. Izy io dia manolo ny rafitra famonoana kôlôniôma sy diôlôida mahery setra mety hampidi-doza, ary ampiasaina betsaka amin'ny zavamaniry lehibe sy salantsalany. Ny fiarovana sy ny maha ambony ny rafitra dia eken'ny mpanjifa mihamaro hatrany. Ireo fitaovana dia afaka mitsabo rano fisotro latsaky ny 1 tapitrisa taonina isan'ora. Mampihena ...
Rafitra fanivanana rano matihanina, Fomba fizotran-tany Ro, Sivana fanadiovan-drano Ro Well, Sodium Hypochlorite System Design, Ro faritra sivana amin'ny rano, Ranomasina mankany amin'ny masinina fisotro rano,